Askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya oo sheegay in aabihii uu ahaa Madaxweynihii hore ee Uganda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Askari ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo magaciisa ku sheegay Maxamed Amin ayaa sheegay inuu aabihii ahaa Madaxweynihii hore ee Uganda Idi Amin Dada.
Amin Yare ayaa sheegay in uu yahay mid ka mid ah labo carruur ah oo hooyadood ay tahay Soomaali aabahoodna ahaa Alhaji Idi Amin.
Wiilkan dhalinyarada ah ayaa sheegay in hooyadii ay ka soo jeedo gobolka Bay dhammaan dikumintiyadii iyo sawiradii ay aabahood la galena ay ku dhumeen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya.
Hase ahaatee wiilkan ayaa warqada aqoonsiga ee uu haysto waxaa ku qoran magaca Aamin Ibrahin Maxamed hooyadiina Khadija Aden Ibrahim.
Madaxweynihii hore ee dalka Uganda Al Haji Idi Amin Dada ayaa ku dhintey boqortoyada Sacuudi Carabiya, halkaasoo musaafuris ugu noolaa sanadkii 2003.